नेताहरूकाे ध्यान “एनिहाउ पैसा कमाउ”मै केन्द्रित - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > बिचार > नेताहरूकाे ध्यान “एनिहाउ पैसा कमाउ”मै केन्द्रित
नेताहरूकाे ध्यान “एनिहाउ पैसा कमाउ”मै केन्द्रित
June 27, 2020 June 27, 2020 GRISHI134
युवराज खतिवडा जति विद्वान भनेर परिचित भएपनि अर्थमन्त्री भएपछि उनकाे विद्वताकाे घैंटाे फुटेर अनर्थमन्त्रीमा रूपान्तरित हुनपुगेका छन् । गभर्नरकाे सुगन्धित व्यक्तित्व बजेट भाषणकाे दुर्गन्धमा लुटपुटिएर डुङडुङ बसाउन थालेकाे छ । समय र परिस्थितिकाे आँकलन नै नगरी हचुवामा कर असुलिकाे मूलढाेका खाेलेर आफैं झ्यालबाट खाेपी प्रवेस गर्दा पनि खतिवडाकाे दम्भ झरेकाे छैन ।
शिक्षामन्त्रीले व्यक्त गरेका अनभिज्ञता, कृषिमन्त्रीकाे असन्तुष्टि र विवादित एमसीसी बजेटमा छिराएर भद्रगाेल निम्त्याउने अर्थमन्त्री कहाँबाट सञ्चालित छन् ? जगजाहेर भैसक्याे । अजासु प्रवृत्तिका हाेनहार व्यक्तित्व युवराज खतिवडा सिंगाे मन्त्रिमण्डलकै शकुनि सावित हुँदैछन्, तै पनि खुल्दैन चेत भने अब रामराम भन्ने मात्रै हाे, काँध थाप्न सकिँदैन भन्दैछन् उद्योगी व्यापारीहरू । अर्थमन्त्रीले चकलेटकाे राजस्वमा गरेकाे चकचक र बिजुलीगाडीमा लुंड्याएकाे धनरासी उनकै लागि गलपासाे सावित भयाे भने पनि अब अन्यथा नमाने हुन्छ ।
बन्दाबन्दी गरेर काेराेना उपचार शीर्षकमा गरेकाे खर्चकाे रफ्तार यसैगरी तेजहुँदै जाने हाे भने राज्यकाे ढुकुटी रित्तिन लामाे समय कुर्नु पर्दैन । नागरिककाे पीडादायक दैनिकीमा रत्तिभर चिन्ता नगरी कमीसन कुम्ल्याउन उदृत वर्तमान मन्त्रिमण्डलका हाेनहार सदस्यहरूकाे क्षमता र विद्वता पनि छताछुल्ल भैत सक्याे । समाज परिवर्तन गरेर सर्वहारा वर्गकाे जग बसाउने जाेगमेयरहरूकाे औकात र हैसियत पनि जनजनले राम्ररी थाहा पाइसके ।
कम्मल ओढेर घिउ लाेप्र्याउने कमरेडहरूमा इमान, जमान र विस्वासकाे ठूलाे खडेरी रहेछ भन्ने कुराे पनि प्रस्ट भाे । आफु आफुमै षड्यन्त्रकाे सिकार भैरहेका कैंचिमार कमरेडहरूकाे भित्री राेदन सुनिदिने र बुझिदिने काेही नभएर भित्र भित्रै पिल्सिएका बिचराहरू एकलकाट्टे बन्दै छन् । यस्तै हाे भने समाज बहिस्करणमा परिएला भन्ने केही केही अल्पज्ञानीहरूकाे ब्रम्ह त सलबलाउन पनि थालिसक्याे । नागरिककाे घरदैलाेमा पुग्नुपर्ने नेताले आफ्नै निवासकाे छतमा मासु भुटेर समय बिताउने दिन भाेग्नुपर्ला भन्ने सायदै साेचेका थिए हाेलान् । अबका दिन भुटभाटमै बिताउने मानसिकताकाे बृद्धि दल दलमा दलालहरूले ढलान गरिसके । त्यसैले पनि हाेला यतिखेर नेताहरूकाे ध्यान “एनिहाउ पैसा कमाउ”मै केन्द्रित छ ।
जन उत्तरदायित्व नै नबाेकेका अर्थमन्त्रीले जनताकाबीच किन जवाफदेही हुने ? हाे,यही दम्भले कसैलाई टेर्दैनन् युवराज खतिवडा । व्यापारी पाेस्ने, नागरिक साेस्ने अर्थमन्त्रीले पाँडे बजेट ल्याए भनेर किन चित्त दुखाई गर्ने ? जे उद्देश्य हाे त्याे पूरा गरेकै छन्, जसलाई रिजाउनु पर्ने हाे रिजाकै छन् अनि के काे चिन्ता उनलाई ? आफैं व्यापारीकाे सुराकी, आफ्नै मनाेमालिन्य भएपछि भाड्मा जाओस् जनता । हिम्मत छ भने गर विद्राेह खुल्लम खुल्ला चुनाैती दिइरहेका छन् अर्थमन्त्री, अनि हामी रमिते भएर गणतन्त्रकाे गुड्डी हाँकिरहेका छाैं । लाज त हामीलाइ लाग्नु पर्ने हाे ।
मारवाडीकाे माल, खतिवडाकाे चाल निजी क्षेत्रकाे बेहाल यहि हाे आजकाे यथार्थ । तैपनि हामी चुचाप छाैं किन ?
हामी चुकेका छाैं, झुकेका छाैं र नागरिक नागरिकबीच मुठ्ठि उठाएर निभेकाे चुलाे बालिरहेका छाैं । नेता चुन्ने बेलामा हामी चुक्याैं, परिस्थितिकाे समवेदनशीलता बुजेर हामी झुक्याैं आज कसैकाे मुख नताकी आ-आफैं एक अर्काकाे सहयाेगी बन्ने प्रयासमा छाैं त हामीले कस्काे के बिगार्याैं ? सरकारले बाँडेकाे राहतमा कमिसन, औषधिमा कमिसन, बिरामीकाे उपचारमा कमिसन, हुँदाहुँदा कर्मचारी हेरफेरमा कमिसन, जनता भनिरहेका छन्, हेराम के देख्नुपर्‍यो ।
वडा वडामा दलालकाे दलाली झाँगिएकाे छ । कुन बाटाे कमिसन कुम्ल्याउने यसैमा दत्तचित भएर लागेका छन् मन्त्री मन्त्राणीहरू । व्यापारीलाई कर छुट चाहिएकाे छ, समाजसेवी भनाैदालाई पद । जताततै दलालै दलालकाे बिगबिगी छ । जुवाडे छुटाउन दलाल, आयात निर्यातमा दलाल, उपचारमा दलाल, शिक्षामा दलाल, गाँसमा दलाल, बासमा दलाल, कपासमा दलाल । हे राम, दलालै दलालकाे चंगुलमा फस्याे मेराे देश कसरी लगाउने पार ?
मैले देखेको, चिनेको र जानेको कमरेड ओली
प्रधानमन्त्रीले लगाए प्रचण्ड माथी संगिन आरोप: भारतसँग मिलेर सरकार ढाल्ने खेलमा प्रचण्ड ?
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको ताल: न हाँसको चाल न त बकुल्लाको चाल ! – मदन बस्नेत
July 9, 2020 January 19, 2021 Raju Thapa